Hoonka baabuurta oo la ogaaday inuu caafimaadka bani’aadamka waxyeelo | Maanta Online
Home / Faallo / Hoonka baabuurta oo la ogaaday inuu caafimaadka bani’aadamka waxyeelo
Posted by: admin in Faallo, Wararka November 3, 2014	Comments Off on Hoonka baabuurta oo la ogaaday inuu caafimaadka bani’aadamka waxyeelo 271 Views
Dhawaaqa rasaasta, deryanka madaafiicda, gariirka qaraxyada waa tilmaamo ay caan ku tahay soomaaliya, marka aad dunida kale joogto. Marka aad soomaaliya joogtana magaalada Muqdisho ayaa lagu yaqaan. Haddaba waa qayb ka mid ah sabababaha aan u maleynayo inay ugu wacan tahay dhego barjowga ama shaqeyn la`aanta dareenkooda maqalka dadka reer Muqdisho. Waayo marka aad magaalada mareyso gaar ahaan waddooyinka gaadiidka badan ee magaalada waxa ku sakhraaminaya dhawaaqa, guuxa, ay sameeyaan iskaamiintooyinka iyo Hoonka gawaarida ay wadaan dhalinyarada. Guuxa Iskaamiintada waxa ku socda gaadhiga, laakiin garaaca iyo yeerinta xad-dhaafka ah ee hoonka gaadhiga maaha waxa uu ku socdo oo la`aantood waa la wadi karaa.
Jabaqda iyo guuxa badan ee ay sameeyaan gawaarida isticmaala wadooyinka magaalooyinka waa waxa ugu badan ee ay waayadan dambe ka cawdaan dadyowga adduunka. Dad badan ayaa ay saameyn xun iyo dhibaataba u keentay hoonka iyo guuxa gawaarida aan kala joogsiga lahayn. Cilmi baadhis la sameeyey waxa lagu ogaaday in dhibaatooyinka uu qofku kala kulmo deegaanka uu ku nool yahay ay ugu xun tahay midda raad ku reebta xasiloonida nafta iyo maskaxdiisa. Hoonka iyo gawaarida guuxa badan waxa ay dhaawici karaan qofka shaqadiisa, waxbarashadiisa, xasiloonidiisa, raaxadiisa iyo hurdadiisa. Keliya intaa ma ahee waxa ay si toos ah u naafeyn kartaa caafimaadka qofka.
Waxa kale oo ay cilmi baadhistu leedahay guuxa ay sameeyaan gawaaridu waa dhibaatada labaad ee dadyowga adduunka haysta. Marka laga reebo dhibaatada koowaad ee ah dikhowga ama wasaqowga hawadda. Hadaba su`aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa Hoonka gawaadhida loogu sameeyey, maxayse tahay sababaha la ogol yahay in loo yeedhiyo? Immisaa sababood ayeyse u yeedhiyaan darawaladeena aan xilkaska ahayn?.
Jawaabta weydiintaa saddex qaybood isu saaran waxa aynu kaga jawaabi karnaa: Hoonka waxa gawaadhida loogu sameeyey in la adeegsado oo laga dhawaajiyo marka baahidii loogu talo galay ay timaado. Sababaha hoonka loo yeedhiyo aad bay u kooban yihiin, waxa ka mid ah qof iyo xoolo wadada soo galay in loogu digo, gaadhiga oo meel goolad ah ku soo jira in uu dareensiiyo waxa soo socda ee aanu arkayn iyo in gaadhi kale oo uu dhaafayo uu ku yiraahdo seed ii bannee. Laakiin darawaladan wada maanta baabuurta dhulka soomaalida u kala goosha oo intooda badan lagu sheego in ay yihiin mooryaantii kaxeeyayaal baabuur u xuubsiibtay ayaan uba bilownayn meesha iyo marka ay habboon tahay in hoonka gaadhiga la yeedhiyo. Daraasad aad loogu dhabbo galay ayaa waxa lagu ogaaday in darawaladu ay shan iyo toban sababood ay hoonka gawaadhidooda u yeeriyaan. Waxa ay kala yihiin:
1. Waxa ay ugu Digaa dadka iyo gawaadhida kale
2. Waxa ay ugu yeedhaan Kirishbooyga lacagta ururiya
3. Waxa ay ku salaamaa dadka ay yaqaanaan
4. Waxa ay mararka qaarkood ugu raaxeystaan sida Muusikada
5. Waxa ay ku kordhiyaan xawaaraha gaadhiga oo hoonka iyo sheelaraha ayaa ay isla qabtaan
6. Waxa ay ku muujiyaan in ay shaqeynayaan
7. Waxa ay ugu yeedhaan rakaabka jidka taagan ee baabuurta sugaya
8. Waxa isugu faana oo isu jiibiya labo darawal oo isyaqaana
9. Waxa mararka qaarkood la yeedhiyaa isaga oo la tijaabinayo hoonka gaadhiga
10. Waxa dadka lagu ogeysiiyaa in Jaadkii yimid
11. Waxa loo yeedhiyaa tartan iyo in xawli la isku dhaafo
12. Waxa hoon yeerinta u mararka qaarkood muujisaa xariiftinimada darawalka
13. Waxa ay darawaladu hoonka gawaadhodooda u yeedhiyaan in ay dhegaha ku cushaan oo caajiska isaga kiciyaan
14. Waxa uu mararka qaarkood hoonku u yahay darawalka iyo kirishbooyga gaadhiga sida hees hawleed ay isku firfircooni geliyaan
15. Waxa uu mararka qaarkood darawalku u yeedhiyaa hoonka iska caaddeysi iyo sabab la`aan.
Inta nooc ee aan kor ku soo sheegnay waxa dhibsada dad badan oo qaba xanuuno xaaladooda caafimaad wax sii yeelaya. Laakiin dad badan oo ay darawaladu gawaadhida BL-ka ah ka mid yihiin ayaa moog in hoonka iyo guuxa gawaaridu uu deegaanka ku yahay qaylodhaan caafimaad darro oo aan dan iyo heelo midna laga lahayn. Hoonka iyo qaylada iskaamiintada gawaarida waaweyn waxa ay keenaan welwel(stress), kaas oo marka dambe si aayar ayaar ah ugu xuub-siibta faalig iyo cuduro keena wadno xanuun
Waxa kale oo ay warbixintu intaa ku daraysaa in guuxa iyo qaylada ka imaaneysa wadooyinka mashquulka ah ay kordhin kartaa cudurka macaanka nooca labaad. Waxa kale oo ay hurdo la`aanta ay keento sawaxanka hoonka baabuurta uu horseedaa welwel iyo isku buuq. Waxa ayna adkeysay xidhiidhka dhaw ee ka dhaxeeya guuxa gawaarida iyo cudurka sokorowga ama macaanka
Waxyaabo badan oo ka mid yihiin welwelka iyo hurdo la`aanta oo ay sababaan guuxa iyo hoonka badan ee baabuurta waxa ay badhi taari kartaa soo hormarka cudurka sokorowga ama Macaanka.In baabuurta hoonka laga banedo ama loo sheego in aanay yeerin ama ka dhawaajin waa arrin aan suurto gal ahayn. Laakiin waxa suurto gal ah waa in loo sheego darawalada baabuurta wada in ay dhimmaan garaacidda hoonka gawaaridooda, iyaga oo sababaha lagamamaarmaanka ah oo keliya u isticmaalaya. Sidoo kale waa in aanay gaadhiga ku xirin hoon tan weyn oo aan kiisa ahayn
Darawalow Casharka koowaad qaado oo hoonka laguma yeedhiyo agagaarka isbitaalada, waayo bukaan hurdo shaxaadaya ayaa jiifa, iskuulada agtoodana ha ku yeerin hoonka, sheelaro xoog lehna ha ku istaagin, waayo arday faham shaxaadaya ayaad ka kala tuuri kartaa, qof maqan oo wadada goynayana ha uga nixin. Haddii aad sidaa yeeli waydo HAH!!! Iyo Habaar waa kuu diyaar.
Haddaba iyada oo lagu wacyigelinayo Darawalada in sawaxanka iyo xasilooni la`aanta deegaanka ay dadka u keento dhibaato caafimaad darro. Markaana ay darawalku mas`uuliyadiisa tahay in uu tashiilo hoonka gaadhigiisa. Si naftiisa iyo tan dadkaba qulubka looga ilaaliyo, deegaankuna u noqdo mid lagu noolaan karo
Haddii uu darawalku talooyinkaa u hoggaansamiwaayo waa in markaa ciidanka nabadgelyada wadooyinka (taraafiga) lagu ganaaxo darawalada loo gacan geliyo. Si ay dakhli fiican uga soo xareeyaan.
Previous: Madaxweyne Xasan: “Xaqdhowrka Madaxbannaanida Soomaaliya waa lama taabtaan”
Next: Ma dooran inaan derbi jiif noqdo!!